Kulan wacgelin ah oo loo qabtay umulisooyinka degmada Jowhar – Radio Muqdisho
Kulan wacgelin ah oo loo qabtay umulisooyinka degmada Jowhar
Kulan looga hadlayay sidii haweenka loogu wacyigelin lahaa inay xiriir joogta ah la sameeyaan xarumaha caafimaadka marka ay uurka leeyihiin ilaa iyo inta ay ka dhalayaan ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxaa ka qeyb galay in ka badan 50 haween oo isugu jiro umulisooyin iyo kal kaaliyaal caafimaad, waxaana u jeedkiisu ahaa sidii la isugu xiri lahaa umuliso dhaqameedyada iyo dhaqaatiirta kale ee ka howlgala xarumaha caafimaadka, si ay isaga kaashadaan in haweenka uurka leh aysan dhibaatooyin kala kulmin xilliga dhalmada.
Xiririyaha tartanka haweenka caafimadka ee gobolka Shabeelaha dhexe Dr Faadumo Sheekh Xasan oo kulanka hadal ka jeedisay ayaa xustay in haweenku ay qabaan dhibaatooyin kala duwan, iyadoo tilmaamtay in loo baahanyahay in wacyigelin badan la siiyo haweenka.
“Dhamaanteen mas’uuliyad ayaa naga saaran haweenka, waxaa nalooga baahanayahay in haweenka uurka leh aan ku dhiiiri gelinayo inay ku xirnaadaan xarumaha caafimaadka, lana siiyo talooyin ku aadan in haweenku ay waqtiyo kala duwan ku soo noq noqdaan xarumaha caafimaadka oo la siiyo jadwal ah xilliyada ay isbitaalka imaaneyso si loola socod siiyo xaaladeeda caafimaad iyo halka ay mareyso” ayay tiri Faadumo Sheekh Xasan.
Guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Shabeelaha dhexe Sahro Maxamed Nur oo ugu dambeyntii kulanka soo xirtay ayaa sheegtay in deegaanno hoos yimaada degmada Jowhar ay haween badan u dhintaan dhiig bax, loona baahanyahay in arrimahaasi wax laga qabto.
“Tuulada biya cadde iyo tuulooyin kale dhibaatooyin caafimaad ayaa ka jirta, waxaa naloo sheegay in haween badan ay umul raaceen oo ay u dhinteen caafimaad darro, waxaan haweenkiina dhaqaatiirta leh idinka codsaneynaa inaad talooyin wacyigelineed siisaan haweenka uurka leh ee idinkugu soo booqanaya xarumaha caafimaadka ee aad ku sugantihiin” ayay tiri Sacdiyo Maxamed Nuur.
Xubno ka tirsan guddiga farsamada Mudug iyo Galgaduud oo Cadaado gaaray
Ururka Haweenka Suxufiyiinta Soomaaliyeed oo hambalyo u diray bahda saxaafadda